Vehicle indawo Blind
Imoto iyindlela anda ingozi. Phakathi ukunyakaza kancane iqhinga engafanele kungabangela engozini yemoto. Ukuqeda ke, izimoto ifakwe izibuko ezengeziwe, izinzwa, ikhamera esimenza abone into engemuva. Nokho endaweni izimpumputhe izinzwa awukwazi ukuvikela wena ngamaphesenti angu-100. Esihlokweni lanamuhla sizoxoxa ngalokho indawo efile nokuthi ikuphi.
Kuyini lokhu? ezibukweni - lokhu kuyingxenye imoto, lapho umshayeli akakwazi ukulawula ngenkathi ushayela. Futhi nakuba umshini ifakwe izibuko, awukwazi ukubethemba ngokuphelele. Abanaso ukunikeza isithombe esiphelele salokho okwenzeka ngemuva emotweni, kodwa kuphela ngokulandela jikelele, ukucacisa isimo samanje. Ngisho emotweni umbono ikhamera kuyoba ucishe elinganiselwe.
Ukuze imoto yakho kuzoba ngaphambi ijika yokukhiqizela band eduze. Esikhathini isithombe ngezansi izinombolo ukhombise ibanga (isikhathi kanye nebanga) e cm, lapho umshayeli kungenziwa phansi uma ucabanga ukuthi iqhinga kuyoba okuphephile. Okokuqala ubona ngaphambili emotweni esibukweni kwesokudla. Ngaphezu kwalokho, njengoba imoto kuyomfica ushabalala emehlweni. Yiqiniso, kungabonwa ngefasitela ohlangothini emva ambalwa, kodwa ngezinye izikhathi ngisho ngesikhathi esincane kangaka Kumanele ingozi. Ngakho, siba nesimo kwakhiwa indawo imoto izimpumputhe is - imoto baphuma ensimini Ngenxa izibuko ohlangothini, kodwa ingakamiswa ubambeke nawe ohlangothini.
umshini ezinjalo cishe ezingabonakali. Ukuthola imoto endaweni izimpumputhe kungacupha odlulayo ukushayisana. Kukhona-ke silula: umshayeli uhlose zikufice enye imoto (thatha, isibonelo, iloli), kubukeka esibukweni futhi ihlelwe kabusha ku esiphikisayo noma kwindlela edlulayo. Nokho, ngalesi sikhathi kuyomfica kakade kwenza omunye umshayeli, ngubani wayegade ngemuva wena hit the okuthiwa izindawo ezingabonakali ezibukweni.
Yiqiniso, izimoto zanamuhla anemisila amadivaysi smart. Lokhu amakhamera izinzwa lapho ukukhiqiza ezibukweni futhi isignali isilawuli uma enobungozi zijike ngokushesha. Kodwa izinhlelo ezinjalo babe neze izimoto, ikakhulukazi ephansi ekupheleni. Ezimweni ezingavamile, umshayeli has isikhathi sokwehlisa ijubane futhi ushintshe imizila.
Kodwa izibalo uthi uma imoto wangena endaweni abayizimpumputhe, igcwele izingozi. Nakuba bezama ukugwema ukungqubuzana yokushayela imoto engozini ukuze bamcasule abanye abashayeli ojikelezayo baye emfuleni oseduze.
Indlela yokugwema esishintshashintshayo efile?
Yiqiniso, ukuyeka evolutions futhi uphendulela - akuyona inketho. Kodwa ngaso sonke isikhathi Kuhle ukukhumbula ukuthi noma iyiphi iqhinga kuyingozi. Ukuvimbela silula - ukwenza ukuqapha izindawo ezingabonakali ezibukweni. Ngenxa yale njongo ukutholakala ngokuzikhethela amakhamera, izinzwa kanye izinhlelo eziyinkimbinkimbi. Uma imoto, musa ubuvila waphinda uqalaza. Iskena ngakho traffic endleleni, uyoba uzivikele kungenzeka eziphuthumayo.
"Kungani izimoto kuphela?" - ubuza. izimoto ezisindayo-duty namabhasi ngenxa yobukhulu enkulu akunakwenzeka ukulawula ngoba ezindaweni efile. Ngakho-ke, uma ushayela imoto wosayizi omkhulu, musa ukwenza iqhinga zifa - ngakho nakanjani kuvuse ingozi. Phakathi ayaphenduka kabusha ukuthumela imoto ukuze esibukweni ihlanganisa ngangokunokwenzeka ngaphezulu ala maqembu. Ngokwesibonelo, kudingeka wenze ukujika ngakwesokunxele T-okuhlangana kuyo. Ukuze iqhinga kwaba belondekile ngangokunokwenzeka, imoto kumele ithunyelwe empambana-engela kwesokudla. Abashayeli izimoto kusengaphambili ivuliwe ezimweni ezinjalo, njengoba uma eqondisa imoto eceleni ukugeleza esizayo. Uma wenza kanjalo bengemuva, ohlangothini lwesokunene empambana kuyoba endaweni eyodwa okuqhubekayo abayizimpumputhe. Lokhu kuyiqiniso ngisho amaloli encane iveni, unjengensephe. Uhlolojikelele in the gumbi sincane kakhulu.
Uhlobo esilandelayo esishintshashintshayo efile obangela bumper, ezingemuva emotweni. A engozini oluthile ohlangothini reverse. Ukuqinisekisa ukuphepha ezimotweni zanamuhla ukhweze inzwa zone izimpumputhe futhi yokupaka izinzwa (ngezinye izikhathi phambili) ngekhamera, ulwazi kusuka okuyinto ku console isikhungo.
Kodwa ukuthi benzeni ukungabi lwalezi nhlelo? Imithetho komgwaqo Kunconywa ukukhiqiza ibhiphu iDemo lapho elungisa. On amaloli ukukhwezwa buzzers - labo tweeters, okuyinto ezifakwe gear reverse.
Futhi uma ucabanga, ngokuba beshayela imoto ukuthi une konke shazi, nenze iphutha ngokujulile. Abadala esibukweni ngokuqinisekile qaphelani, kodwa izingane ngubani okwamanje kukhona endaweni isiqu, ayoba mancane amathuba. Lokhu kusebenza futhi ezivalekile ezincane (isib, amakholomu). Uma unokungaba, waphinda ahlole imoto kumbuthano futhi uqiniseke ukuphepha iqhinga.
abashayeli abanolwazi ukuhlukanisa kokubusa main - ukukhethwa efanele ijubane futhi isikhundla. Ngesivinini ephephile kanye nebanga ungakwazi kalula ubalekele imoto ongabonakali. In an icala ngokwedlulele, umshayeli kuyoba ngesikhathi sokugcina kanye nebanga ukuze uthole kude nawe. Umthetho wesibili - Njalo sebenzisa amasignali ithuba. Ngempela, iningi izingozi ezenzeka uma kabusha, zenzeka ngenxa amasignali iphutha akufakiwe. Uma umshayeli wabona zazihlanganisa blinker misa, yena ibuyisele ukunciphisa ijubane, ngoba ngeke ukwazi kusengaphambili ngenhloso yakho zokuhlela kabusha. Esiminyaminyeni sezimoto kubalulekile ukuba banamathele ezolile ukushayela isitayela. Umdlalo Checkers noma yini okuhle asipheli. Yiba nkomoni kwabanye abasebenzisi bomgwaqo futhi uqhubeka Imininingwane ukugeleza rate.
Kahle usethe esibukweni
Kulungiswe kahle nezibuko - isihluthulelo ukuphepha. Ake sibheke indlela yokusingatha kahle kubo. Ngakho kuqala senza ukulungiswa side izibuko. Ukuze wenze lokhu, kudingeka sibe ngesikhathi beshayela. Guqula ikhanda lakho kuze kube sohlangothini lwesokhohlo eceleni futhi sibheke esibukweni kwesokunxele. Wakhe adalule ukuze izitho zomzimba kuphela onqenqemeni ezingemuva bumper ubonakala kuwo. Ngendlela efanayo esibukweni is kushintshwe esifanele. Umzimba ngokwawo kufanele kube kancane ngezansi phakathi (isiqondiso ovundlile). Kumele kube nezibuko kushintshwe ngendlela efanele. Kuningi Bheka izindawo ezingabonakali ezibukweni, ngakho udinga ukwehlisa inani labo. Lapho ushayela uzokwazi ukuthatha lonke ulwazi ukuthi ebuya futhi izinhlangothi imoto. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukufakwa kwesibuko salon inikeza ukwaziswa okwengeziwe amaphesenti 50 ngalokho okwenzekayo kuka ohlangothini kokubili. Ochwepheshe batusa kokufaka izakhi parabolic, okuzokwenza sihlanganise engela esiphezulu umbono nge ukuhlanekezela omncane.
Indlela uyiphatha? Esibukweni isethwe ukuze umshayeli wabona emaphethelweni Imingcele umgibeli ikhanda futhi ingxenye phezulu ophahleni. Okungukuthi, abangabantwana elementi kumelwe amboze yonke indawo ewindini elingemuva. Izinto ezincane gumbi, ungabona ngokusebenzisa ke, kuzoba ngcono kakhulu ngawe.
Ungalokothi wenze izinguquko phezu izibuko impukane, ukugxila ukugeleza. Thikazisa isimo sezimoto, wena nakanjani kuvuse ingozi. Kubalulekile ukuthi akukhona shaking futhi isixwayisi ngenkathi ushayela. Zisizakala nesibuko enjalo ayiphephile kakhulu. Faka endaweni isici esisha. Kuzoba ezishibhile silungisa imoto ne kabusha abayizimpumputhe.
Prakthiza ebonisa ukuthi lapho sisebenzelana zinsongo, izimpumputhe endaweni ikhamera kanye izinzwa ukusiza kakhulu. Uma une isabelomali esincane, ungakwazi ukuthenga iqoqo labo futhi ubeke izinzwa yokupaka ukuthi iyoba yini mayelana nebanga indaba ngokungadingekile lapho kuphathwa Goal. Amadivayisi ukufunda esishintshashintshayo efile ekuhambeni, ibiza kakhulu futhi ayifakiwe zonke ekilasini izimoto ibhizinisi.
Isixazululo enengqondo kakhudlwana - ukufakwa yokupaka izinzwa ngekhamera ezingemuva umbono. I nezinzwa aboshelwe izimbobo we-bumper, futhi ikhamera - e niche ngaphansi inambapleti. Idivayisi kohlelo ayiyona inkimbinkimbi, ngakho ungakwazi ukuyifaka ngesandla.
Eshibhe - ezwakalayo yokupaka izinzwa. It angathengwa ngentengo ruble 2800. I element kuhlanganisa inzwa 4, kanye izintambo yena ukufunda indlela ukuthi kunyatheliswa on idatha encane ukubonisa ngenkambo zamanje. Amadivayisi ifakwe ngemuva umbono ikhamera kanye LCD isibonisi izobiza kakhulu ezibizayo - ruble angaba yizinkulungwane 10.
Ngakho, sathola ukuthi izindawo ezinjalo izimpumputhe futhi ukuthi ungazivikela kanjani kuzo ngenkathi ushayela.
Ukufaka esikhundleni sokuhlunga umoya - okuvelele
Porsche 911 - legend we-German embonini yezimoto
Proper isondo ukuqondanisa. Umthelela on drivability
Isondo Vibration eziqondisa ngesivinini 90-100 km / h. Izimbangela Nezingozi izixazululo
Kanjani ukuhlola umshini ukuhayijekha i? Kanjani ukuze ifohle iye, imoto ihayijekhiwe noma cha?
Kuhhavini "Ngaphambi" akusebenzi - izimbangela kungenzeka futhi amakhambi
Michael Shatz: biography nomndeni we-TV umethuli (isithombe)
Kufanele kube kangakanani kwengcindezi ingane? Norma blood pressure ngobudala
Umuthi 'Nimesil "- yokusetshenziswa
West-Siberian base I-oli: kwendawo indawo, izici, ngendlela yokubona izinto, izinkinga, abathengi
"Gepatodzhekt" ngoba izinja: yokusetshenziswa, analogs kanye nokubuyekeza
Top 10 amahlaya engcono. I 10 kakhulu amahlaya amabhayisikobho
Ubudlelwane Property: umthetho, imigomo, izibonelo
Kuyini ngesibonakhulu? ukuhlaziywa enemininingwane
Izicathulo Ilula futhi ukhululekile ngoba ebhukuda olwandle